နိုင်ငံခြားမှဝင်လာတဲ့ ဂျယ်လီကိုစားမိရာကနေ ကလေးသုံးဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင် – Think Before You TRUST
Home>>သတင်းအတုစစ်ဆေးခြင်း>>နိုင်ငံတကာ>>နိုင်ငံခြားမှဝင်လာတဲ့ ဂျယ်လီကိုစားမိရာကနေ ကလေးသုံးဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်
တွေးပြီးမှယုံApril 12, 2019
နိုင်ငံခြားမှဝင်လာတဲ့ ဂျယ်လီကိုစားမိရာကနေ ကလေးသုံးဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်
ဒီနေ့မှာတော့ တွေးပြီးမှယုံ ရဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်က သတင်းတပုဒ်ကို စစ်ဖို့ပေးပို့လာပါတယ်။ အဲ့ဒီသတင်းက နိုင်ငံခြားမှဝင်လာတဲ့ ဂျယ်လီကိုစားမိရာကနေ ကလေးသုံးဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီသတင်းကို စိုးရိမ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေထားတဲ့သူတွေဆိုရင် လူလေးသောင်းကျော်တောင်ရှိနေပါပြီ။ တကယ်တော့ ဒီသတင်းဟာ သတင်းတုတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
လာအိုနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ့် အဖြစ်ပျက်တခုက ပုံနဲ့ ဂျယ်လီအတုအကြောင်းရိုက်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုတခုကို screenshot ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတို့ကိုပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားသည့်ပုံစံနဲ့ရေးသားထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း လာအိုနိုင်ငံမှာ သတင်းတုအများအပြားထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့သူတွေက ဟမ်ဘာဂါ အသိုးတွေစားပြီး သေဆုံးတယ်လို့ ရေးသားကြသလို တချို့သူတွေက မလတ်ဆက်တဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကိုစားပြီးတော့ သေဆုံးတယ်လို့လဲရေးသားကြပါတယ်။ သတင်းအတိကျကိုတော့ တွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ဒါကြောင့်သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ စိုးရိမ်စရာသတင်းတခုကိုတွေ့ပြီးဆို ချက်ချင်းမယုံကြည်ပဲ သတင်းတွေကို အရင်စစ်ဆေးပြီးမှ ယုံကြည်ဖို့ တွေးပြီးမှယုံ ကနေထပ်ပြီး တိုက်တွန်းပါရစေ‌‌‌‌နော်။ သူငယ်ချင်းတို့စစ်ဆေးဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုလျှင်လည်း တွေးပြီးမှယုံ ကိုပေးဖို့ စစ်ဆေးခိုင်းလို့ရပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားနှင့် တုပဝတ်ဆင်မှုအား တိုင်ကြားသည့် တိုင်ကြားစာအတု
AA က ISIS နဲ့ ပူးပေါင်းဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်း ထည့်သွင်းမယ်လို့ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းတု
ထိုင်းနိုင်ငံဆန္ဒပြပွဲတွေက မွတ်ဆလင်တွေဦးဆောင်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား? လက်သုံးချောင်းထောင်တယ်ဆိုတာကကော ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ?
ဘဂ်လားဒေ့ရှ်ဘက်မှ ARSA အင်အား ၁၀၀ ကျော် ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတု
၄ နှစ်ရွယ် ကလေး ဆရီးယားနဲ့ ဂျော်ဒန်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်လာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
ရက်စွဲအလွဲနဲ့ ပြန့်နှံ့​​နေတဲ့ ICJ ရုံးချိန်းသတင်း